Wararka - Shirkadda Weibo oo Qabatay Shirka Shaqada 2021
Shirkadda Weibo ayaa Qabatay Shirka Shaqada 2021
Subaxnimadii 1-da Maarso, shirkaddu waxay qabanqaabisay kulan shaqo oo 2021 ka dhacay qolka shirarka ee C3. Shirka waxaa hogaaminayay kuxigeenka maareeyaha guud Liu Wei, iyo Xue Gangyi, agaasimaha iyo hogaamiyaha Weibo, iyo maareeyaha guud Li Dong, kuxigeenka maareeyayaasha guud Qi Jifei, Niu Deqing, iyo madaxa dhaqaalaha Liu Runhong ayaa kaqeybgalay kulanka.
Maareeyaha Guud Li Dong ayaa shirka ka soo jeediyey warbixin shaqo oo cinwaankeedu ahaa “Iskuxirka Mu’asasada, Tayeynta Tayada iyo Xoojinta Ganacsiga Weyn, Ku dadaalaya bilaabida Safarka Cusub ee Weibo ee“ 14-ka Shan-Sano ”. Maareeyaha Guud Li Dong ayaa tilmaamay markii dib loo eegay shaqadiisa sanadka 2020, Hogaanka adag ee gudiga xisbiga ee shirkada kooxda iyo shirkada otomaatiga ah, shirkadu waxay u hogaansantahay hogaaminta xisbiga waxayna si hagar la'aan ah u fulinaysaa go'aamada waaweyn iyo dejinta Golaha Dhexe ee Xisbiga. . Si loo gaaro horumarka tayada sare leh ee shirkadda hage ahaan, waxaad diirada saartaa tilmaamayaasha dhaqaale ee sanadlaha ah iyo howlaha muhiimka ah, si degan oo xoog leh uga jawaab dhibaatooyinka iyo caqabadaha, iskuduwaha horumarinta ganacsiga shirkadda iyo ka hortagga iyo xakameynta cudurka faafa ee cusub ee sambabaha. oo ay qabtaan shaqo adag oo suuq geyn ah, cilmi baaris iyo horumarin, wax soo saar iyo maareyn Natiijooyin muhiim ah ayaa lagu gaarey gaaritaanka horumarka joogtada ah ee tayada ganacsiga iyo kahortaga iyo xakamaynta cudurada faafa, ujeeddooyinka iyo howlaha ugu muhiimsan ee marxaladda "xoojinta" ayaa si guul leh lagu gaarey, iyo farqiga u dhexeeya "horumarka tayada sare leh" ayaa sii yaraaday.
Maareeyaha Guud Li Dong ayaa soo jeediyay hadafka 2021. Waxay sidoo kale si cad u sheegtay in 2021-ka ay tahay sanadguuradii 100-aad ee aasaaskii Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha iyo bilowgii mudadii "14-kii Shanaad ee Shanta Sano". Shirkaddu waxay si buuxda u hirgelin doontaa Golaha Dhexe ee Xisbiga, shirkadaha kooxaha, shirkadaha otomaatiga, iyo saamilayda shirkadda iyada oo la raacayo hagidda xilliga cusub ee Xi Jinping ee hantiwadaagga astaamaha Shiinaha. Go'aan qaadashada iyo dejinta kulanka iyo guddiga agaasimayaasha, waxay u hoggaansamaan "horumarin tayo sare leh", hirgelinta fikradda shaqada "hagaajinta", qoto-dheer dib-u-habeynta, xoojinta hal-abuurnimada, iyo saldhigga horumarka "wax soo saar", si kor loogu qaado cabirka ee warshadaha jira iyo balaadhinta jihada alaabooyinka cusub oo ah barta ay ka bilaabayaan. Ballaari ganacsiga ugu weyn ee dareemayaasha go'doominta awoodda, gal aagga dareemayaasha cusub, iyo dardar-gelinta hagaajinta cabbirka iyo qaybta xakamaynta.
2021 waa sanadka koowaad ee isbadalka iyo casriyeynta shirkada. Waa sanadka koowaad ee "Qorshaha 14-aad ee Shanta Sano". Hadafkeenu wuxuu kujiraa warqad. Weibo waa ganacsigeenna guud iyo gurigeenna. Waa inaan wadaagno rabitaan isku mid ah. Wada shaqeyn adag. Waxyaabaha adag ee adduunka waa in si fudud loo sameeyaa, waxyaabaha waawayn ee adduunkana waa in si faahfaahsan loo sameeyaa. ” Waa inaan si firfircoon uga jawaabnaa wicitaanka shirkadda ee ah "beddelidda iyo hagaajinta waxtarka", ciyaarta u galno si deggan, oo si geesinimo leh u qaadno mas'uuliyadaha culus. Noqo qof isku fiican, noqo Weibo ka fiican!
Xaqiijinta Sare Ac sensor Sensor, Isticmaalka Awoodda Hoose Dc Sensor-ka Haatan, Hall Sensor hadda, Saamaynta Hoolka Saamaynta Hadda, Danab Sensor hadda, Hall Saamaynta Ac Sensor-ka Hadda,